दाँत दुख्नेदेखि हृदयघातसम्मको समस्याबाट छुटकारा पाउन प्रयोग गर्नुहोस् निम, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
नीम औषधीय गुण भएको रूख हो। नीम एउटा आयुर्वेदिक औषधि हो। जुन स्वास्थ्यकोलागि धेरै किसिमले फाइदाजनक छ । नीम, हाम्रो शरीर, छाला तथा कपालको लागि अत्यन्तै फाइदाजनक औषधि हो । तर यसको तितो स्वादले गर्दा प्रायले यसको सेवन गर्न मनपराउदैनन्, त्यसैले यसको जतिनै गुणहरु भएपनि उपयोग गर्न त्यति रुचाउदैनन् । तर यसको रस को सेवन गर्न सजिलो हुने हुदा, त्यहि रस सेवन गरेर नीममा पाइने धेरै गुणहरुको फाइदा लिन सकिन्छ।
यदि शरीरमा मन्द ज्वरो सदा रहि रहन्छ र अन्य कुनै औषधिले पनि छोएन भने १ चम्चा निमको बोक्रा भित्रको छाला २ गिलास पानीमा पकाउनु होस्, आधा गिलास भए पछि बिहान खाली पेटमा नियमित खाने गर्नुस, जस्तो पुरानो जरो पनि केही हप्तामै ठीक हुन्छ।
नीमको बोक्रा, कुटकी, सुठो र मरिच सबै बराबर मिसाएर चूर्ण बनाउने। चौथाँइ चिया चम्चा मनतातो पानीसँग बिहान\_बेलुका सेवन गरे औलाको ज्वरो पनि बिस्तारै निको हुँदै जान्छ।
नीमको ताजा पातको रस निकालेर २\_२ थोपा नाकमा हालेमा टाउका अनि कपाल दुखेको ठिक हुन्छ।
नीमको कमलो पातको रस मनतातो पारेर जतापट्टिको आँखा दुखेको छ त्यसको अर्को पट्टिको कानमा ३\_४ थोपा हाल्ने गरेमा आँखा दुखेको ठीक हुन्छ।
दुबै आँखा दुखेमा दुबै कानमा हाल्ने।
नीमको तेल आँखामा लगाउने र हरियो ८\_१० पात खाली पेटमा ३ दिनसम्म खानाले ठीक हुँदै जान्छ।
नीमको फूलको काँढा पकाएर बिहान\_बेलुका कुल्ला गर्ने गरेमा दाँत तथा गिजा सम्बन्धी रोगहरु निको हुन्छन।
नीमको गेडाको लेदो एक चम्चा वा पातको लेदो एक चम्चा ३\_४ महिना नियमित खाने गरेमा वातरक्त निको हुन्छ। यसै प्रक्रिया द्धारा कुष्ठरोग, क्षयरोगको ज्वरो, अजीर्ण, चर्मरोग सम्पूर्ण निको भएर आउँछ।
नीममा एन्टी इंफ्लेमेट्री तत्‍व पाइन्छ, नीमको रसले चाया, डण्डीफोर आदिलाई नियन्त्रण गर्नुका साथै यसको नियमित प्रयोगले भविष्यमा समेत यसबाट मुक्ति दिलाउँछ। नीमको जूस रसले अनुहार तथा शरीरको छालाको रंग निखार्नमा बिशेष भूमिका खेल्दछ।
यो नीमको जूस महिनामा १० दिन सेवन गर्ने हो भने यसले हृदयघातको सम्भाव्यतालाई समेत निर्मुल नै पारी दिन्छ।
नीमको रस कानमा हाल्नाले कानको बिभिन्न बिकारहरुमा समेत फाइदा गर्दछ। नीमको जूस पिउनाले शरीरको बिकारहरु निस्कासन गर्न बिशेष सहयोग पुरयाउद छ।
नीमको नियमित सेवनले कपाललाई मुलायम र चम्किलो बनाउँछ।
पाचन क्रियालाई समेत ठिक बनाउनमा सहयोग गर्दछ। नीमको जूसले मधुमेहका रोगीहरुलाई समेत धेरै फाइदा गर्दछ। दैनिक नीमको जूस पिउनाले ब्‍लड़ सुगरको (लेवल) एकदम नियन्त्रण हुन्छ।
नीमको रस दुई थोपा आँखामा राख्नाले आँखा तेजिलो बनाउनुका साथै यदी कन्जंगक्टवाइटिस भएको छ भने पनि चाडैनै ठिक गरिदिन्छ।